europetrains Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: europetrains
နေအိမ် > europetrains
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဥရောပသို့မကြာမီအချိန်မရွေးသွားရန်စီစဉ်ထားပါသလော? အဖြေဟုတ်သည်မှန်လျှင်, ထို့နောက်သင်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေဥရောပအသုံးပြုမှုစေချင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကမှန်သည်. သငျသညျရထားလက်မှတ်တွေပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်, which are cheaply priced when traveling on…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ မင်းတို့လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာဥရောပကိုလာလည်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆကြစို့. ဒီတစ်ခါလည်းသင်နှင့်မိတ်ဆွေများကကောလိပ်မှဦးတည်မတိုင်မီအားလပ်ရက်အပေါ်စီစဉ်. ဖြစ်ကောင်း, သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောအားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သင်၏မိသားစုယူချင်. ကောင်းစွာ, သင်သည်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ရာ၌ခန့်ထားပြီ….
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အားလုံးခရီးသွားဧည့်ဥရောပ၌ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ဥရောပလိုမြို့ကြီးပြသွားရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်. Eiffel မျှော်စင်ဘေးတွင်သူတို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပျော်ရွှင်စွာရပ်နေသည်, Colosseum သို့မဟုတ် Big Ben ကလူတိုင်းကိုခြွင်းချက်ခံစားရစေသည် (ကျနော်တို့လုံးဝကြောင်းအရ!). သင်တစ် ဦး Instagram စွဲရှိမရှိ…